Sheikh cali dheere ?Ciidamada AMISOM hadii la kordhiyo taas ma cabsi gelin doonto Al-shabaab? – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2013 3:32 b 0
Baraawe, October 31, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa ka hadlay natiijada la filayo in ay ka soo baxdo fadhiga gollaha amaanka ee Qaramada midoobey, kaas oo intiisa badan diirada lagu saarayo in la kordhiyo ciidamada AMISOM isla markaasna la tayeeyo kuwa dowladda federaalka.
Afhayeenka guud ee ururka Al-shabaab sheikh Cali Maxamuud Raage oo saxaafada ururka la hadlay, waxaa uu sheegay in aysan al-shabaab waxba u arkin shirka Qaramada midoobey ee lagu dalbanayo in ciidamada loo kordhiyo Soomaaliya.
Waxaa uu tilmaamay in aysan taasi keenayn cabsi, balse ururka Al-shabaab ay diyaar u yihiin in ay dagaalamaan mar kasta oo ay difaacaan dalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
?Al-shabaab waxay diyaar u yihiin mar kasta in ay la dagaalamaan cadowga ilaa daqiiqada ugu dambaysa, ciidan la keenaa hadda waxba soo kordhin maayaan.? Ayuu yiri sheikh Cali dheere afhayeenka ururka Al-shabaab.